Galaxy S10 na akwụkwọ ahụ aja | Gam akporosis
Esisịt ini ke ukara ngosi nke ọhụrụ Samsung S10 nso, ọtụtụ ndị ọrụ malitere na-uru nke oghere dị n'ihu, agwaetiti ebe igwefoto / s dị nke ụdị dị iche iche nke S10 dị na ụlọ ọrụ Korea etinyewo n'ahịa.
N'ezie, ọbụlagodi ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya mepụtara ngalaba pụrụ iche na ya ụlọ ahịa isiokwu ebe anyị nwere ike ijide ọnụ ọgụgụ buru ibu n'ime ha. Agbanyeghị, ị gaghị achọ ịkwụ ụgwọ ha ma ọ bụrụ na ịnwere ike ịchọta ha n'ịntanetị ma ọ bụ na ị nweghị mmasị na ha. Eeh ịchọrọ ịhazi S10 gị, anyị na-egosi gị na akwụkwọ ahụ aja.
Ọtụtụ n'ime ndị a na akwụkwọ ahụ aja m na-ewere si eri na reddit ebe ndị ọrụ kpọgidere ha kere na-emegharị ka ọnụ nke Samsung ụlọ ọrụ na agwaetiti ma ọ bụ agwaetiti na n'ihu. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ịchọta akwụkwọ ahụaja dị iche iche dịka ọnụ anyị si nwee igwefoto n'ihu ya, (S10e na S10) ma ọ bụ ese foto abụọ n'ihu ya (S10 +).
Ihe oyiyi niile m hapụrụ gị n'okpuru, dị na mkpebi mbụ ha na nkewa dị ka ọnụ, n'ihi ya, naanị ị ga-ebudata ya ma debe ya dị ka akwụkwọ ahụaja na njedebe gị ka ebe e mere maka ese foto dị ebe ọ kwesịrị.
1 Akwụkwọ ahụaja maka Galaxy S10
2 Na akwụkwọ ahụ aja maka Galaxy S10 +
Akwụkwọ ahụaja maka Galaxy S10
Na akwụkwọ ahụ aja maka Galaxy S10 +
Offọdụ n'ime akwụkwọ ahụaja S10 na S10e kwa anyị nwere ike iji ha na Galaxy S10 +, ọ bụrụhaala na ebe igwefoto ahụ dị oji kpamkpam, ebe ọ bụ na ọ bụghị na ọ dị mma dị ka ọnụ maka nke e mere ya na mbụ.
Ọ bụrụ n’ịchọghị igosipụta / zoo igwefoto dị n’ihu, ị nwere ike họrọ ibudata na akwụkwọ ahụ aja nke ndị ọzọ ọnụ dị ka 2 nke Razer, Google Pixel 3, Galaxy A7, Xiaomi Mi9 ma ọ bụ OnePlus 6T.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Hazie gị Galaxy S10 na ndị a na akwụkwọ ahụ aja